Baro inaad Hackkasbashada koontada 'Instagram' FUDUD [XAL]
Inicio/Hacking/Baro inaad Hackkasbashada koontada Instagram [ISBADBAAD NAFTAADA]
Baro inaad Hackkasbashada koontada Instagram [ISBADBAAD NAFTAADA]
6 167.480 4 daqiiqo akhri
Hadaad rabto inaad ogaato sida ay u fududahay hackdhagayso akoon instagram ah waxaad joogtaa meesha saxda ah. Kahor intaanan bilaabin waxaan kuu deyneynaa Jadwalka waxyaabaha ku jira hababka aad ka heli doonto maqaalkan si loo fududeeyo akhriskaaga, haddiiba aad rabto inaad ka boodo hordhaca. Waxaan ku ogeysiineynaa in aan dhawaan bilownay qodobka sida loo arko qoraalada aad LIKE ku leedahay barta Instagram.
1 Way ku xiiseyn kartaa: Sida looga ilaaliyo bartaada 'Instagram' HACKERS
2 siyaabaha loo hackdhagayso akoon instagram ah
3 1 - Keyloggers Waa maxay?
4 2 - Codsiyada xakameynta waalidka ama basaasida APPs
5 3- Iyadoo loo marayo Furayaasha la keydiyey
6 4- Hackdhegta Instagram adoo adeegsanaya Xploitz ama Phishing
7 5 - By "halmaamay lambarkaaga sirta ah"
7.1 Waan jeclahay tan:
Marka ugu horeysa waa inaan kaaga digaa in howlahaasi ay yihiin gebi ahaanba sharci darro. Laga soo bilaabo Citeia ma dooneyno inaan dhiirrigelinno ku takrifalka qalabkan waxaanan ku falanqeyn doonnaa xulashooyinka kala duwan aragtida gebi ahaanba aragtida iyo isku dayga inaan ku burburinno qaababkan annaga oo kor u qaadnay wacyigelinta dhibbanayaasha suurtagalka ah ee hackeo. Waa inaad maskaxda ku haysaa inay kuxirantahay wadanka, ganaax mooyee sidoo kale waxaa jira ciqaabyo qaada 6 bilood ilaa 2 sano oo xarig ah dambiga noocan ah. Sidoo kale, waligeed ma noqon doonto anshax hackabuur koonto Instagram ah, hackkasbashada koontada Tik Tok o hackkasbashada xisaab Facebook ah xitaa haddii aad ku guuleysatay inaad ku sameyso si gebi ahaanba qarsoodi ah oo ammaan ah. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho kaliya qaababka soo socda si aad ugu tijaabiso koontooyinkaaga Instagram.
Intaas markaan idhi, aan u dhaadhacno ganacsiga. Hadda waxaad baran doontaa siyaabaha ugu waaweyn ee loo xado sirta iyo hackkasbashada koontada 'instagram', ama wax uun.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Sida looga ilaaliyo bartaada 'Instagram' HACKERS
siyaabaha loo hackdhagayso akoon instagram ah
Waxaa jira farsamooyin dhowr ah ama istiraatiijiyad ansax ah oo aad awoodid hackAbuur boggaga 'Instagram', waxaan ku tusi doonnaa sida ay u adag yihiin.
1 - Keyloggers Waa maxay?
El Keylogger waa mid ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan adduunka hackku dhexjiraan kuwa wax jabsada. Qalabkani waa softiweer noo oggolaanaya inaan duubno oo wax ku basaasno wax kasta oo "loo maleeyo inuu dhibane yahay" ku qoro kumbuyuutarka ama aaladda mobilka.
Qalabkani waa mid aad khatar u ah maadaama ay duubayaan wax kasta oo ka soo galaya shabakadaha bulshada iyo emaylka iyo aqoonsiyada bangiga ee "Bangiga Guriga" (adeegyada bangiyada ee internetka). Waxaan wax badan uga sheegeynaa halisteeda maqaalkan
Waa wax xiiso leh in la ogaado hawlgalkeeda si loo ogaado sida ay uga hortegi karaan annaga iyo in aan awood u yeelanno in aan helno anshax nabadgelyo leh si aan u ilaalino aqoonsigeenna ammaan. Waxay kaa caawin kartaa haddii lamaanahaaga ama qof aad taqaanid uu doonayo hackdhegayso xisaabtaada Instagram.
Baro: Sida loo abuuro Keylogger FUDUD
2 - Codsiyada xakameynta waalidka ama basaasida APPs
Codsiyadaan gaarka ah ee qalabka mobilada iyo kaniiniyada waxaa loogu talagalay ladagaalanka tuugada ama xakameynta waalidka, laakiin waa loo isticmaalay hackdhegayso maadaama ay kuu oggolaanayaan inaad aragto waxqabadka kumbuyuutarka iyo xitaa wadahadalka ku dhex jira barnaamijyada. Waxa kale oo aad arki kartaa codsiyada loo isticmaalo aaladda, qoraalka wicitaanada imanaya iyo kuwa baxaya iyo wixii la mid ah. Kadib xogtan waxaa loo diri doonaa meel fog si aad u heli karto. Haddii aad xiiseyneyso inaad ogaato waxa ay yihiin, waxaan kaa tagi doonnaa xiriiriye ku saabsan barnaamijyadooda xakameynta waalidka ugu fiican. Sidaas oo ay tahay, ujeedkan gaarka ah, midka ugu badan ee ay adeegsadaan hackers waa mida aan kaa tagno marka xigta. Waxay leedahay tiro aan la koobi karin oo adeegsi ah, way shaqeysaa waxaana loo qaadan karaa keylogger.
Barnaamijka xakamaynta waalidka inta badan ay isticmaalaan HackW oodna
3- Iyadoo loo marayo Furayaasha sirta ah
Tani waa hab kale oo lagu heli karo iyo hackxisaabaadka dhagaha instagram. Waxaan adkeyneynaa inaysan sharci ahayn ama anshax, haddii aad rabto hackdhegta ku samee adigu ikhtiyaarkaaga ah.
Xaalado badan, daalacashadayadu waxay keydiyaan furayaasha sirta ah si ay awood ugu yeeshaan inay si fudud ugu galaan dhuftoyada, tani waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aan rabno hackdhagayso instagram.
Bog furayaasha badanaa waxay bixiyaan shaqadan waxayna keydinayaan gelitaankaaga gelitaanka koontooyinkaaga hadaad horey u fasaxday. Waxaad u badan tahay inaad ku isticmaali doonto isla erey isku mid ah bogag badan. Marka mid helitaan, laga yaabee inaan marin u helno inta hartay. Haddii aad rabto inaad barato sida, hubi qodobka soo socda.
Baro: Hackfuraha sirta dhegaha (Ma garanayo hackdhegta)
4- Hackdhagta Instagram adoo adeegsanaya Xploitz ama phishing
Xploitz waa qaab ka mid ah hackku soo gala shirkad. Xaaladdan oo kale Instagram.
Waxaa jira boggag boggan oo fuliya shaqadan, bogaggan waxay iskuxiran yihiin Galitaanka 'Instagram', marka haddii adeegsade uu galo xogtooda gelitaanka beenta ah, waxay ka diiwaan gashan yihiin keydka koontada hacker. Isticmaalidda barnaamijyadan waxaa kaliya oo loo baahan yahay in loo diro emayl ama instagram toos ah dhibbanaha iyada oo la raacayo iskuxirka ay ku siinayaan ee ka imanaya interface cloning oo aad sugto dhibbanaha inuu galiyo aqoonsigiisa. Khaldami karin haddii la isku daro Injineernimada bulshada, hoosta waxaan ku tusaynaa sida loo isticmaalo.
Noocyada noocan ah ee bogagga ah hackdhegta had iyo jeer ma aha kuwa dhab ah, halkii badankoodna waa been waana qayb ka mid ah kutlada weyn ee khiyaanooyinka khadka tooska ah ee internetka kusii badanaya matoorada raadinta. Xilligan way adag tahay in la helo bogag sida ah BILAASH xploitz rulz ama ODAY loshteam inay u adeegeen ujeedkan, laakiin hadda niman badan oo khayaano badan ayaa la wareegay magacyadan si ay u fuliyaan kuwan. Kuwa dambe, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hageheena sida loo ogaado haddii bog ka mid ah hackdhegtu waa been.
Baro: Waa maxay Xploitz iyo sida loo isticmaalo.
Baro: El Farshaxanka injineernimada bulshada
Injineernimada bulshada waxaa loo isticmaalaa in laga helo macluumaadka qofka tagaya hackdhegta, daraasadda dhibbanaha iyo shakhsiyeynta emaylka si ay isaga dhigaan qof kale aqoonsigiisa oo ay qof uga dhigaan dhibbane hackgasho si aan macquul ahayn.
5 - By "halmaamay lambarkaaga sirta ah"
Qaabkani wuxuu faa'iido kuu yeelan doonaa oo keliya haddii aad haysatid aaladda dhibbanaha oo aad heli karto oo aad isticmaali karto, maadaama farriinta soo-kabashada aad awood u yeelan doonto inaad koontada ka gasho. Waa hab loo adeegsaday hackdhagta lamaanaha, ehelkaaga ama dadka kuugu dhow ee aad si muuqata jirka uga heli karto qalabka.
Baro: Hackdhegta xisaab ah Instagram adoo adeegsanaya "soo kabashada ereyga sirta ah"
Haddii aad ka heshay maqaalka oo uu faa'iido lahaa, waxaan kuugu mahadcelineynaa inaad nala wadaagtay. Waxaan rajeyneynaa inaan ku caawinay, hadii kale, ka tag faallooyinka oo dib ayaan u eegi doonaa codsigaaga.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiisaynayso barashada: 6 Siyaabood oo Loogu Talo Galay Sida Loo Daawado Sheekooyinka 'Instagram' Iyadoo aan raad la hayn?
barnaamijyadooda basaasnimo sida hackdhagta instagram account sida hackdhagta insta fudud sida hackdhagta instagram sida hackdhagta instagram adduunka hacker sida hackdhagayso instagram sida hackkasban xisaabta insta sida hackdhagayso akoon instagram ah sideey ii leeyihiin hackeado instagram sida aan awoodo hackdhagta instagram leh furayaasha mozilla samee keylogger hack insta hack Instagram hackdheg la app basaas hackfuraha sirta dhegaha hackfuraha sirta ah ee keylogger hackdhagta instagram account hackdhagta instagram account hackdhagta hackdhagta insta cod bixin la'aan hackdhagta instagram fudud hackdhagta instagram bilaash ah hackdhagta instagram cod bixin la'aan hackdheg tik tok hackdhagayso akoon instagram ah insta hack keylogger habka loogu talagalay hackdhagta instagram waa maxay keylogger xado furayaasha sirta ah
Hackfuraha sirta dhegaha (Ma garanayo hackdhegta)
Waa maxay Xploitz iyo sida loo isticmaalo.
Luulyo 25, 2020 markay tahay 6:21 pm
Sideen ku heli karaa qof ama ku ogaan karaa meesha, ma haysto lambarka taleefankooda mana haysto magacoodii hore
Citeia isagu wuxuu leeyahay:
Ogast 18, 2020 markay tahay 2:39 pm
Salaan! Haatan kuma siin karno jawaab sax ah su'aashaada, waxaan ka shaqeyneynaa inaan maqaal ka qoro. Salaan.
Alexandra Montenegro Gomez isagu wuxuu leeyahay:
Sebtember 29, 2020 markay tahay 2:57 pm
Waad salaaman tihiin, waxay igu soo dubeen fiidiyow aniga instagram, cabashadii waan sameeyay oo way diideen, sidee fiidiyowga uga tirtiri karaa koontada qofkaas ama hackdhagayso xisaabtaada
Oktoobar 10, 2020 markay tahay 9:56 pm
Salaan! Waa inaad sii wadaysaa warbixinta. salaan
sheila isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar 13, 2020 markay tahay 7:36 pm
Waad salaaman tahay hackkasbasho xisaab taas hackeron sida hackeo?
Oktoobar 13, 2020 markay tahay 9:22 pm
Waxaan haynaa dhowr qodob oo ku saabsan, si aan uga soo kabano koontadaada raadso habka kuugu habboon adiga. Salaan.